ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး အဆောက်အအုံကို ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား - Yangon Media Group
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး အဆောက်အအုံကို ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၈- နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ကျော်သက်တမ်းရှိသော ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး (ယခင်ဒပ်ဖရင်ဆေးရုံ)ကို ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ် မတ် ၂၈ ရက်တွင် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြားတပ်ဆင်လိုက်ပြီဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအ နှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ YHT မှ သိရသည်။
ယင်းအပြာရောင်ကမ္ပည်း ပြားတပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော် မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်များတက်ရောက်ကာအပြာရောင် ကမ္ပည်းပြားတပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
”အဆောက်အအုံကတော့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့ မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအ နှစ်အဖြစ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ွှံ မှ စီမံကိန်းအရာရှိ ဦးသူရိန်အောင် ကဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ( ယခင်ဒပ်ဖရင်ဆေးရုံ)ကို အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ် လော့ဒပ်ဖရင်၏ ကြင်ရာတော် လေဒီဒပ်ဖရင်၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် မတည်ကာ ဒပ်ဖရင် ဆေးရုံအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ကြောင်း၊ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိဆေးရုံ၏ အဆောင်(ဒီ)ကို ဆောက်လုပ်ရန် လေဒီဒပ်ဖရင်ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယဘုရင်ခံဇနီး လေဒီဖရိုင်ရာ က အုတ်မြစ်ချပေးရာမှ ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သဖြင့် ဒပ်ဖရင် ဆေးရုံအဖြစ် စတင်အသုံးပြုခဲ့ ကြောင်း၊ ဂျင်မခါနာကလပ်ဖြင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသဖြင့် ဂျင်မခါနာ ဆေးရုံဟုလူသိများကြောင်း၊ ဆေး ရုံစဖွင့်စဉ် သူနာပြုနှင့် ဝမ်းဆွဲသင် တန်းများပေးခဲ့ပြီး နွမ်းပါးသူများ ကို ပညာသင်ဆုများပေးခဲ့ကြောင်း၊ သင်တန်းဆင်းများတွင် မင်းတုန်း မင်းမြေးတော် မြင်းခုံတိုင်မင်း သမီး၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်စသည့် ထင်ရှားသူ များပါဝင်ကြောင်း၊ ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးကို ဒေါက်တာစောဆ၊ ဒေါက်တာဒေါ်ရင်မေစသည့် မြန်မာ့ ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီး ဆရာဝန် ကြီးများက အစဉ်အဆက်ဦးစီးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟို အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ရန်ကုန်၏ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ် ခင်ပြုံးကြည်က ”ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗဟို အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ရန်ကုန်ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၂ နှစ် သက်တမ်းရှိ ပြီဖြစ်တဲ့ အဆောင်(ဒီ)မှာယခုလို အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင် ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူ မိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
YHT ၏ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မိုးမိုးလွင်က ဗဟိုအမျိုး သမီးဆေးရုံကြီးသည် အမျိုးသမီး များလိုအပ်ချက်အတွက် ရှေ့ဆောင် အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကြီးများ၏ကာယÓဏစွမ်းအားဖြင့် တည် ထောင်ခဲ့ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်အ မျိုးသမီးများအတွက် အားကိုးပြု ရာ အထင်ကရနေရာဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောခဲ့သည်။
#YangonMedeaGroup | #DemocracyToday
ထိုင်းသင်္ကြန်တွင် မလုံမခြုံဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကို ထောင်ဒဏ်၊ ငွေ??
ရန်ကုန်ရှိ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်နေသူများကို ??
ဆီးရီးယားရှိ အမေရိကန်တပ်များ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း စတင်ရုပ်သိမ်းမည်
ပထမအကြိမ် လမ်းကြမ်း ဖိတ်ခေါ် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကို တာချီလိတ်မြို့၌ ကျင်းပ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ